Xaajo.com – Xaajo.com: The latest Ogaden / Somaligalbeed News on the Net.. » Demoqraadiyada iyo Horumarku ma Isku Xidhanyihiin?: Cadde G. Yalax
Demoqraadiyada iyo Horumarku ma Isku Xidhanyihiin?: Cadde G. Yalax
February 20, 2012 - Written by xaajo - Edited byxaajo
Dimuqraadiyadu, si kooban waa in dadku doortaan si xor ah kuwa xukumaya.Horumarkuna waa horumar dhaqaale-bulsheed. Bulsho ma horimari karto dawlad la’aan.Waxyaabaha ay dawlad uun samayn karto si horumar loo gaadho waxaa ka mid ah:-1) Dawladu waa in ay dhisto kaabayaal dhaqaale sida jidadka, isgaadhsiinta,garoomada,dakadaha iwm.Hadii aysan kuwani jirin, horumar dhaqaale ma suuroobayo.2) Dawladu dhinaca kale, waa in ay abuurtaa jawi hantiilayaasha gaarka ahi ay maal galin kusamayn karaan. Maalgashi shisheeye la,aantiis horumar dhaqaale isna lama gaadhayo, in ay jiraan khayraad dabiici ah mooyee sida shidaalka oo kale. Waddan kasta oo horumar dhaqaale gaadhay wuxuu ku gaadhay warshadayn iyo maalgashi shisheeye. Si maalgashi uu u suuroobo waa in ay dawladu sahashaa ruqsooyinka ganacsiga. Waa in ay fududaysaa shuruuc hoosaadka ku saabsan maalgashiga iyo shati qaadashada.
3- Waxaa kale oo aad muhiim u ah in ay jiraan garsoor madaxbanaan oo suurogaliya fulinta xeerarka qandaraasyada iyo heshiisyada dhexmara shirkadaha. Hadii si kale loo dhigo waa in shirkadaha waa wayn ee maalgashiga samaynayaa ay ogyihiin in sharciga loo simanyahay isla markaana ay jiraan maxkamado madaxbanaan oo dulmeeri kara shruucda waafiqidooda iyo fulintoodaba.
4-Waa in ay jirto xasiloonaan siyaasadeed. Horumar dhaqaale-bulsheed lama gaadhi karo hadii uusan jirin daganaansho siyaasadeed. Maalgashi lama samayn karo hadii hantiilayaashu ay ka cabsi qabaan in dawlada jirtaayi ay dhacayso waxa badalyaana uusan hubnayn. Hadii si kale loo dhigo waa in ay jirtaa dawlad dimquraadi ah. Nadaam dawladeed oo si xor ah loo doortay unbaa laasimi kara mudo dheer. Xukuumad kasta oon ku binaysnayn rabitaan shacab aakhirka meel xun unbay kudanbaysaa sidaan ka aragnay taariikhda. Garsoor madaxbanaan(judicial independency and Rule of law) waxaa samayn kara oo kaliya dawlad dimuqraadi ah. Sarraynta sharcigu ma aha wax lamaano ku ah ama lagu yaqaano xukuumadaha xoog ku jooga ah. Hadaysan jirin cadaalad hufan ama nadaam dawladeed oo dagan ma jirto wax lagu aamino oo ay hantiilayaal shisheeya ahi u maalgashadaan wadan ay halakeeyeen arimahaas aan xusnay.
Sida ka muuqata marka sawirkaas aan bixinay, waxaan jawaab u helnay su,aasha cinwaanka qormadan kooban ee ahayd isku xidhnaanshaha Dimuqraadiyada iyo Horumarka.
Waxaa inoo soo baxay inay isku xidhanyihiin oo aysan labada arimood kala maarmi Karin. Dood baa jirta dhahaysa, Dimuqraadiyad la,aan waa la badhaadhi karaa. Waxaana dadka fikirkan qabaayi ay tusaale u soo qaataan waddanka SHIINAHA, oo ay ku doodayaan dimuqraadi maaha wuuna hor marayaa si xawli ah oon waligeed la arag. Laba jawaabood baa loo hayaa fikirkan:1) Waxa kasta oo loo badanyahay wuxuu leeyahay naadir(exception). Marka Shiinuhu waa naadir, waa sicii madoobaa, waxa u suuro galay iyaga qaalib waxa dhaca maaha ee waa arin aad qariib u ah.2)Jawaabta labaad ee loo hayo Shiinaha koristiisa dhaqaale iyadoon Dimuqraadiyadi jirin waxaa weeye: mudada dheer marka lafiiriyo, wax soconaya maaha. Sababtoo ah dadka markay waxoogaa helaan ee ay ka koraan bariis raadiska waxay u baahanyihiin sharaf raadis, ixtiraam raadis iyo in ay kaalin ku yeeshaan waddankooda sida loo maamulayo iyo cida xukumaysa.Waxaad eegtaa kala ablaablayna kala saraynta baahiyaha(Need hierarchy) ee uu sameeyay khabiirkii cilmi nafsiga Abraham Manslow. Marka marooqsiga xisbiga shuuciga ah ee Shiino, ma sii waari doono, mar aan fogayn waxaa imaan kacdoon bulsho oo khasbi doona isbadal dimuqraadiyadeed. Macnaha doodi kama jirto in isbadal xoogleh uu ku imaan doono Shiino, ee waxa lays waydiinayo waxaa weeye isbadalkaasi waa mid wajigee leh.
Gabogabadii, waxay la tahay qoraha maqaalkan in Dimuqraadiyada iyo Horumarku isku xidhanyihiin. Xataa hadii uu horumar dhaqaale soo hor maro, waxaa hubaal ah, sida aan ku aragnay wadamada Shabeelada Aasiya(Asian Tigers),in ay Dimuqraadiyadi ka curanayso meeshii dhaqaalaheedu hagaago.Marka Dimuqraadiyada iyo Horumarka dhaqaale way isku xidhanyihiin, inta badana si horumar dhaqaalo loo gaadho waa in la helaa dimuqraadiyad dhamaystiran(Liberal Democracy).
Qore:- Cade G. Yalax